nkà mmụta sayensị na ihe mgbako
Online free nkà mmụta sayensị na ihe mgbako enye gị ohere igosi mgbakọ na mwepụ arụmọrụ na ọnụ ọgụgụ na fractions, dị ka adianade do, mwepu, multiplication, nkewa, enweghị, cosine, aak enweghị, aak cosine, tangent, arctangent, logarithm, exponential, ike, ọdịmma, radians, degrees .
nkà mmụta sayensị na ihe mgbako Online free enye gị ohere igosi mgbakọ na mwepụ arụmọrụ na ọnụ ọgụgụ na fractions, dị ka adianade do, mwepu, multiplication, nkewa, enweghị, cosine, aak enweghị, aak cosine, tangent, arctangent, logarithm, exponential, ike, ọdịmma, radians, degrees .
Akụkụ dị nta mgbako
Akụkụ dị nta mgbako - adianade do, mwepu, multiplication, nkewa nke fractions, na-na integral nọmba.
Ntụpọ fractions mgbako
Akakabarede nke ntụpọ nọmba na-akụkụ dị nta na akụkụ dị nta ka ntụpọ nọmba
Quadratic akụkụ solver mgbako
-Edozi ihe ọ bụla quadratic akụkụ, chọta discriminant na niile mgbọrọgwụ nke akụkụ.
Ọnụọgụ abụọ nọmba mgbako
Ịrụ mgbakọ na mwepụ arụmọrụ: multiplication, nkewa, adianade do, mwepu, ezi uche NA, ezi uche ma ọ bụ, modulo 2, na ọnụọgụ abụọ nọmba
N'ịwa ike nchebe paswọọdụ dabere na isiokwu.